Gini Okpukpe Casino Gbasara - Codes Bonus Casino
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Online Grik
(345 votes, nkezi: 4.00 si 5)
Loading ...Afọ iri gara aga ahụwo ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke casinos na Gris. Dị ka akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ njem na Gris, ndị Gris na-eme ihe kachasị mma iji dọta ndị egwuregwu n'afọ niile ma ọ bụghị naanị n'oge ezumike oge okpomọkụ. Dị ka akụkụ nke mgbalị ndị a, ebe ndị Gris na-agbaso ihe nlereanya na Las Vegas. Ha na-abụkarị akụkụ nke nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ntụrụndụ, na-enye ụlọ obibi mara mma, ntụrụndụ, egwuregwu, ntụrụndụ. Ndị ahịa na-azụ ahịa Casino na-abụkarị maka ndị njem si mba ọzọ, ọ bụ ezie na egwuregwu klas dị nnọọ egwu na omenala Grik, na Gris, ọtụtụ puku kaadị na-egwu klọb n'ofe mba ndị na-abụghị casinos.
Ndepụta nke Top 10 Greek Online Casino Sites
Taa, anyị na-eme njem nleta kacha mma na Europe iji nọgide na obodo ndị dị na Mediterenian na akụkọ ihe mere eme. Obodo a mara ama maka egwuregwu Olympic mbụ, nri na-enweghị nri na ndị ọkà ihe ọmụma. Ya mere, CasinoToplists zigaara Gris!
Greece - geography na obere akụkọ ihe mere eme;
Casinos nke ala na mba n'oge ahụ:
Ịgba chaa chaa n'ịntanetị:
Iwu iwu nke ndị na-arụ ọrụ n'ógbè ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ha zuru ezu;
A naghị egbochi ndị ọrụ ụwa n'enweghị ikike.
Isi obodo Gris isi nke Athens na adreesị;
Ihe omuma banyere Gris na ndi Grik.
Gris oge ochie
Ịgba chaa chaa na Gris nwere ogologo akụkọ ihe mere eme n'oge ochie. Ndị Gris oge ochie bụ ndị egwuregwu nwere mmasị ma kwenyere n'ememe nke Chineke. Dịka ọmụmaatụ, na akụkọ ifo Gris, e nwere akụkọ na mgbe mmeri ndị Titans gasịrị, Zeus na ụmụnne ya bụ Poseidon na Hades fere nza ka ha kpebie onye na-enweta otu ma ọ bụ n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa. Zeus meriri Olympus, Poseidon - oké osimiri, na Hedis - ụwa. Ihe nkesa nke a abụghị ihe dị mkpa, ihe na-adọrọ mmasị site n'eziokwu bụ na ejiri ọkpụkpụ mee ihe ike nke ụwa.
Akụkọ na-adọrọ mmasị na-akọwa mmalite nke ịgba chaa chaa na casinos. Ozugbo Tycho, chi nwanyị nke uba, na-eje ije na osisi ogwu nke Olympus, ebe Zeus (mgbe ọ bụ nwata playboy na ndị nwere onwe ha) rafuola ya. Site na njikọ a ka a mụrụ nwa agbọghọ - nwa ọhụrụ, naanị ịchọta obi ụtọ n'ịchepụta egwuregwu dị iche iche ebe a ga-ekpebi ikpe. O ji obi ụtọ legide anya esemokwu bilitere n'agbata egwuregwu ahụ ma gbaa ndị na-emechu mbà n'obi ume igbu onwe ha. N'igosi nwa ya obi ebere, jiri obi ya nye ya ụlọ, na ọnụ ụzọ ya, ndị na-agafe agafe-na-ere ọkụ.
E wezụga akụkọ ọdịnala banyere ịgba chaa chaa na ezigbo akụkọ ihe mere eme. Ya mere, na "Odyssey," Homer na-akọ akụkọ banyere otú ndị na-eti mkpu na-esi nyere ndị agha Gris aka, na-echere nnọchibido nke Troy. Otu onye Gris na-akọ akụkọ ihe mere eme bụ Plutarch na-ekwu banyere otu nwanyị Persia nke Persia bụ Parisatis, bụ onye na-anụ ọkụ n'obi banyere egwuregwu ahụ.
Craps e wetara ya na Gris site na Asia ma bụrụ onye a ma ama n'etiti mmadụ niile. E nwere ebe pụrụ iche - ndị na-akpọ casinos maka egwuregwu egwuregwu. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọkà iwu Grik na-ezo aka n'ịgba chaa chaa na-agbagọ, n'ihi na ụdị ntụrụndụ a bụ ihe ịma aka n'omume ọha na eze, na-ebelata ntọala nke ọchịchị. Ahụhụ maka ndị egwuregwu na-enweghị ike ịgbagha, n'agbanyeghị agbanye ùgwù ha, jere ozi dịka ndị ohu.
Gọọmenti nke oge a emeela ọnọdụ maka njem, ịgba chaa chaa, yana ịchịkwa ahịa gemblingovy site na ndị ọchịchị ruru eru. Àgwà Gris na ịgba chaa chaa bụ ihe siri ike, iwu gọọmentị bụ iji gbalịa igbochi ndị mmadụ ịgba chaa chaa. Dị ka iwu Grik si kwuo, a na-ekwe ka ịgba chaa chaa na-ekwe n'ime ụlọ ịgba chaa chaa. A na-egbochi ụdị ịkụ nzọ na ịgba chaa chaa n'èzí casinos, n'ihi na imebi iwu mpaghara na-enye ndị omempụ.
A malitere chaa chaa chaa mbụ na Gris na 1928 na mpaghara Loutraki, naanị ndị na-agba ọsọ 9 na-agba ọsọ na mba ahụ. arụ ọrụ nke casinos na Greece na-achịkwa Gambling Commission, nke e guzobere December 20, 2011. N'October 2013, e kpebiri ikpebi ihe niile ọ na-eme: ikikere, nlekọta na ịchịkwa casinos nke ala na mba. Kọmitii nwere ndị isi asatọ na onye isi oche, onye a họpụtara maka otu afọ ise. E nyere ikikere ndị mbụ na 1994, atọ casinos: Casino Mont Parnes, Casino Korfu na Casino Rodos. Na Gris, ọ dịghị otu ọ bụla: niile casinos dị n'aka ndị ọrụ ole na ole. Ihe ka ukwuu n'ime ha bụ Regency Casino, nke gụnyere oche casino Mont Parnes na Thessaloniki.
Na 2002, gọọmentị gris nyere iwu na-agbagha agbagha 3037 / 2002, nke na-egbochi egwuregwu ahụ na egwuregwu kọmputa niile na ebe ọha. Iwu a siri ike kagburu naanị na August 2011. Iwu ọhụrụ ahụ na-akọwa ụkpụrụ nke ịgba egwu egwuregwu na-ewebata ihe ndị a na-akpọ "kaadị egwu" ndị a chọrọ iji nwee ike ịgba chaa chaa iwu na Gris. Iji nwee ike igwu egwu na chaa chaa, ndị Grik ruru afọ 21.
Ebee, mgbe na ihe igwu egwu na casin Grik?
Ka ọ dị ugbu a, Gris na-arụ ọrụ ịgba chaa chaa itoolu. Ha na-ahụ na ala ndịda na agwaetiti Gris nke Rhodes, Syros na Corfu. Otutu casinos na-emeghe site na Monday ruo Sunday ma na-arụ ọrụ 24 awa n'ụbọchị. Ha niile bụ egwuregwu ndị a ma ama dịka ruleti, blackjack, video poker, Punto Blanco, Baccarat na igwe oghere. Egwuregwu ndị na-asọ oyi poker na-akwado. Ụdị ejiji na ọtụtụ casinos Gris - mara mma, ma agbalịrị ịbanye n'ime akpa osimiri.
Casino Loutraki - Gọọmenti mbụ nke Gris. Ọ na-adị na nnukwu ụlọ nkwari akụ nke dị na Loutraki-Agioi Theodoroi. Nke a bụ otu n'ime casinos kachasị ukwuu na Europe, nke na-enwetakwa ohere spa na ogbako. Tụkwasị na nke a, ndị egwuregwu nwere ike igwu egwu oge ha nwere ike ịnweta nlegharị anya nke ebe ahụ, dịka Canal Canal, Museum Ethnographic na Temple nke Apollo, Kọrịnt.
Nke a bụ ụlọ ahịa ndị kasị ewu ewu na Gris dị na Tesalonaịka, "isi obodo dị n'ebe ugwu" nke Gris, ebe ọ bụ na 1996. Ọ dị nso n'ọdụ ụgbọ elu nke Masedonia ma na-agba ọsọ 20 nkeji site na isi obodo. A na-achọ ụlọ ụlọ chaa chaa maka ọmarịcha mma ya. Ụlọ ala ahụ na-enye 893 slot machines na teepu 66 maka egwuregwu ụlọ. Enwekwara ụlọ nke onwe maka Ụlọ Elu Rollers Club Regency, nke nwere ihe ntinye 18 na ogwe 14 maka egwuregwu ụlọ.
Rhodes Casino mara ama maka ụlọ ọrụ oge ochie ya na imepụta ime. Ọ na-egosipụta n'ụzọ zuru ezu ikuku dị na obodo ochie ma na-adị na n'ókèala nke ụlọ nkwari akụ Grande Albergo delle Rose boutique hotel. Ọ nwere ihe ọ bụla iji nwee obi ụtọ egwuregwu: igwe oghere, ọtụtụ tebụl poker, roulette na egwuregwu ndị ọzọ. The casino na-arụ ọrụ uwe uwe: 19.00 kwere uwe zuru oke na ime ụlọ, na mgbe 19.00 - naanị uwe mgbede, uwe ma ọ bụ tuxedo.
Na Corfu, isi obodo Corfu, na-arụ ọrụ otu n'ime casinos mbụ na Gris, na 1962, ọ bụ chaa chaa mbụ na Gris, na-alaghachi na wheel wheel. Ugbu a, ọ dị na ntụrụndụ ntụrụndụ dị na Corfu Holiday Palace, ruo mgbe ngwụcha 80 nke 20th na narị afọ gara aga nọ n'obí nke Empress Elizabeth nke Austria-Ndị ndị na-akọ akụkọ ihe mere eme bụ Princess Sissi. A na-emepụta Ụlọ oriri na ọṅụṅụ site na 20.00 ruo 03.00 maka ndị ọbịa na-ele 23 afọ.
Ụlọ ala a dị n'ime ọhịa ebe Lefkos Pyrgos, nke dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Xanthi.
Ihe owuwu nke ụlọ abụọ ahụ (2200 sqm) kwekọrọ na ịdị elu nke nnukwu osisi ndị gbara ya gburugburu, ịmepụta oghere pụrụ iche na-adọta ndị ọbịa site n'oge mbụ. Ndị Gris na - enwe obi ụtọ na nke a bụ nanị cha cha ụlọ ọrụ na - arụ ọrụ na steeti - n'ihi na ndị ọzọ bụ ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa ma ọ bụ na - ahụ maka ya. Na casino ị nwere ike igwu egwu American ruleti, blackjack, ọkpụkpọ poker na ígwè oghere.
6. Carto Carras Casino
Ulo ala mbụ na Gris Porto Carras dị na ogige Sithonia Hotel Porto Carras, nke bụ ezigbo ihe gbasara Halkidiki. Enwere igwe 425 oghere, tebụl nke 17, 13 blackjack table tables 5 na poker. Ọzọkwa, e nwere ụlọ VIP maka nnukwu ụlọ, ebe e nwere tebụl atọ maka blackjack, tebụl roulette tables 5 na 1 poker table. Eji nlezianya dozie ime n'ime New Orleans, enwere nri na mmanya.
Ụlọ ala a na-arụ ọrụ n'otu ụlọ nkwari akụ, naanị 10 nkeji ụgbọala si n'etiti Patra. Ihe mgbagwoju anya di na nma beach na Rio, na ogige ndị na-acha uhie uhie na mpaghara 35,000 square square, n'ihu ụlọ Venetian. Casino Rio na-enye egwuregwu dị iche iche na tebụl dịka blackjack na roulette, ndị na-agba ọsọ 279 na ndị na-egwu poker na-echere tebụl maka Texas Holdem Poker. Ndị ọbịa nwere ike igwu ígwè ọrụ na oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị, n'ihi na ha na-emeghe 24 awa n'ụbọchị.
8. Cros Syros
Casino dị n'obodo Syros Ermoupoli. Nke a bụ ụlọ cha cha ọhụrụ - ọ malitere ịrụ ọrụ nanị n'April 1997. Otú ọ dị, ọ bụ ụlọ nkwari akụ mbụ "Europe", nke e wuru na 1830. E weghachiri ụlọ ahụ na nsọpụrụ, akụkọ ihe mere eme ya na Cycladic ọcha, ma ugbu a, ọ bụ ezigbo mkpuru. Syros Casino nwere table 26 maka egwuregwu ndị a kacha ewu ewu: roulette, blackjack na poker poker, yana 185 slot machines.
9. Mont Parnes na Regency Casino
Regency Mont Parnes Casino Resort dị na obodo Mont Parnes, n'ebe dị anya nke nanị 17 kilomita si etiti Athens. Ụlọ ihe nkiri a na ụlọ nkwari akụ nke dị n'otu n'ime ebe kachasị mma na ebe a na-adịghị ahụkebe ebe a na-akpọ Attica basin, o nwere ihe karịrị akụkọ ihe karịrị afọ iri anọ. N'ezie, ọ bụ cha cha mbụ, nke meghere na Gris. N'oge na-adịbeghị anya, otu ìgwè nke Regency Entertainment SA zụrụ ihe mgbagwoju anya, nke nwere ọtụtụ mmezi na nrụzigharị, ma gbasaa na mpaghara 18,000 dum. Ugbu a, ọ bụ cha cha nke ụkpụrụ kachasị elu n'ụwa. Enwere tebụl blackjack 16, tebụl roulette 32, tebụl 2 maka Punto Banco na poker table 2, na karịa 700 ohere. Ahịa ụlọ ahịa na ụlọ nkwari akụ nwere ike nwee ike izuike ma nwee obi ụtọ na ọrụ nke Club Olympus. E wezụga nke ahụ,
Ịgba chaa chaa n'Intanet
Ọ bụ ezie na iwu Grik anaghị egbochi ndị ọrụ ịgba chaa chaa iji nweta ikikere maka casinos na-arụ ọrụ na Gris, mana otu ịgba chaa chaa n'Ịntanet nwere otu OPAP. Otú ọ dị, Gris, ndị egwuregwu nwere ike iji ọtụtụ atụmatụ nke ndị si mba ọzọ, bụ ndị na-achọpụta ebe ị na-edebe maka ndị ọrụ Grik. Ugbu a, e nwere XINUMX online casinos nke na-enye egwuregwu na Bekee ma ọ bụ Grik ma nabata ọnụego na euro ma ọ bụ dollar US.
Na 2002, gọọmenti gọọmentị nke gafere iwu na-amachibido ụdị egwuregwu kọmputa ọ bụla. Otú ọ dị, Iwu nke 2011 na-eme ka ndokwa nke iwu a belata, nke na-enye ikikere nke ndị ọrụ nke ịgba chaa chaa na kọmputa. Ma, n'eziokwu, ọ bụ naanị maka ịnye ihe egwuregwu kọmputa ma ọ bụrụ na 2030 nwere ụlọ ọrụ Gọọmenti na-agba chaa chaa OPAP. Ka o sina dị, na 2013 Ụlọikpe Europe kpebiri na ọ bụ naanị na OPAP, na-akwadoghị iwu European Union. Ya mere, iwu dị na Gris kwesịrị ịgbanwe dịka ihe ndị European European Union chọrọ, Greece ga-amanye imepe ahịa ya ka ọ bụrụ asọmpi site n'aka ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọgaranya akụkọ ihe mere eme nke casino nke Rhodes
Rhodes Casino bụ nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa mara mma na Gris. Ogologo oge tupu ụlọ ahụ amalite ọrụ ụlọ ịgba chaa chaa, ebe nkwari akụ a mepere emepe meghere ma May 24, 1927. Nke a dị ọtụtụ ndị a ma ama site na gburugburu ụwa, dika Winston Churchill, Aristotle Onassis na George Papandreou. Ụlọ nkwari akụ ahụ ahụla ọtụtụ akụkọ ihe mere eme, dịka ntinye aka n'akwụkwọ nke State nke Israel tọrọ ntọala na 1948.
Casino Loutraki ghọtara na ọ bụ ihe kacha mma na gburugburu ebe obibi
Na 2013, a na-enye Club Club Casino Loutraki onyinye Nrite nke International Foundation for Environmental Education "Green Key na 2013" maka ikere òkè ya na nchedo gburugburu ebe obibi. E nyere Casino maka mmepe nke atụmatụ atụmatụ iji meziwanye gburugburu ebe obibi ha. Ihe eji eme ihe bu iji belata mmiri, ojiji nke ihe mkpofu, ihe ndi ocha, kesaara ndi oru na ndi ozo banyere nchedo gburugburu ebe obibi.
Ebe Gris, na obere akụkọ ihe mere eme
A naghị akpọ Gris ka ọ bụrụ "nwata nke ọhụụ nke ọdịda anyanwụ" - ebe 3,000 afọ BC, e nwere mmalite mbụ nke agwaetiti nke Crete, nke a na-akpọ Minoan. N'ozuzu, akụkọ Grik a maara anyị nke ọma site na akwụkwọ akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme - akụkọ ndị gbasara Sparta na Atens, nke a gladiator agha, nke a bụ ọgba aghara dị egwu n'etiti Alaeze Ukwu Rom ma dabere na ya site na 146 AD
Kedu ihe Gris oge a? Ugbu a ọ bụ ebe a ma ama. Kemgbe 1924, Gris ghọrọ mba ndị omeiwu, na 2002 ghọrọ ego ego nke euro. Gris nwere mpaghara nke 13 (mpaghara), nke gụnyere aha 51 (ihe analogues nke ógbè Russia). Fọrọ nke nta ka 98% nke ndị bi - Ndị Kraịst Ọtọdọks, na ezumike kachasị amasị - Ista.
Casinos na ịgba chaa chaa na Gris
Eziokwu ahụ bụ na Gris na-enweta nnukwu ego site na njem na-emetụta àgwà gọọmenti na ịgba chaa chaa. E mepere chaa chaa mbụ na 1928 dị n'akụkụ Loutraki (nke a bụ obodo na-ewu ewu nke obodo a ma ama). Ọnọdụ nke ọrụ ndị ahụ bụ nke kachasị elu ụwa, na site na egwuregwu dị iche iche na ịma mma nke ụlọ nzukọ nke ndị ọbịa na-amalite ọnọdụ euphoria.
Ndị na-eme njem nleta na-enwe mmasị na steeti na Thessaloniki, nke isiokwu ya bụ «Regency». Ọ bụ nke kachasị ukwuu na-agụnye na mgbakwunye na dum cha cha chara nke 3 smart ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ogwe, na ọbụna ya ụlọ ihe nkiri.
Obere kilomita ole na ole site na Atens, ụlọ ịgba chaa chaa «Mont Parnes». Ọ bụ ebe dị n'elu Ugwu Parnassus, ma ị nwere ike ịnweta ebe ahụ naanị site na ụgbọ ala. Ọrụ bụ ụlọ egwu mara mma kwa ụbọchị ma e wezụga Wednesday. Ị ga-achọ ịnweta paspọtụ ma hụ akwa ejiji - ejiji egwuregwu na uwe nkịtị.
Ndị na-enwe obi ụtọ na ọrụ n'èzí na-adọta nhọrọ Siroe n'àgwàetiti ahụ na Ermoupoli. N'ebe a, na mgbakwunye na ụlọ ngosi 3 dị egwu nke dị na ụlọ nke 19th century, ị nwere ike ịnweta njem na-agaghị echefu echefu na ụgbọ mmiri na ịga ije n'okporo ámá dị n'okpuru.
Ụlọ ọrụ kachasị elu na-arụ ọrụ na ịgba chaa chaa na Gris, nke a kpọrọ ohi.
Egwuregwu Online na Gris
Dị ka anyị kwuru na mbụ, onye nwe obodo kachasị ukwuu - bụ otu òtù zuru ohi. Ọ bụ ya na-achịkwa ịgba ọdụ online ugbu a. Òtù egwuregwu ịgba chaa chaa RGA na ọnọdụ a ghọtara na-adịghị amasị, mana na mpaghara ebe ọ na-achọghị n'ezie ka ha n'ókèala ha na Europe poker ọnụ ụlọ.
N'ebe a, ị nwere ike igwu cha cha chantanetị, mana naanị na saịtị ndị e nyere ikike. Gris na-eme ka ego ahụ niile ghara ịhapụ mba ahụ. Ya mere, ndị na-arụ ọrụ cha cha na-emebu ga-ahapụ oge ezumike, mana enwere ohere ịnwale ekpomeekpo mpaghara ma ka bụrụ 100% ijide n'aka na ịkwụ ụgwọ nke mmeri.
Athens ebe nkiri
Athens na-ejupụta ebe niile.
Nnukwu obodo . Ọ na-agụnye ụlọ 4: ụzọ ọnụ ụzọ (propylene), ụlọ nsọ nke na-asọpụrụ Atens, nke Parthenon, ụlọ nsọ nke asọpụrụ Chineke nke Mmeri, na Ụlọ Erechtheum na asọpụrụ Poseidon na Athena. Ebube nke ụlọ ndị ahụ na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ, mgbe ha hụrụ na nlegharị anya ga-ewe oge ọ bụla na 4-5 awa.
Ụlọ nsọ Zeus . Ebe: na nso Acropolis na Syntagma, isi obodo. N'oge ahụ, ụlọ nsọ ahụ dị ebube dịgidere na-ebibi. Ma aghaghị m ịsị na ọ dịghị ihe dị ala ma dịkwa mkpa maka ịlele.
Ụmụaka Ụmụaka . Adreesị: Kydathenaeon, 14; Plaka. Ebe ọ bụ na 1987 ụlọ ihe ngosi nka na-atọ ụtọ ndị okenye bụ ndị ike gwụrụ ịhụ ebe ochie na mkpọmkpọ ebe, n'ezie, ndị ọbịa na-eto eto. E nwere ihe ọ bụla na - aga n'ihu: ụdị ntụrụndụ dị iche iche, ihe ngosi na mmemme.
Museum of History of Greek Costume . Adreesị: 7, Dimokritou. Ihe nchịkọta ihe ngosi nka nke ihe kariri 250,000 ihe ejiji site na ndi ozo. Onye ọ bụla nwere mmasị na ejiji ga-adọrọ mmasị ịhụ ụdị nke Gris.
Egwuregwu Ndị Agha Gris nke Gris . Adreesị: crossroads Vassilissis Sophias Av. na Rizari, 2. Gris dị ka anyị niile maara bụ ama maka agha agha. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ihe niile metụtara agha, site na kaadị na ejiji ka ọ bụrụ ihe eji eme ihe.
Ezigbo ihe gbasara Gris na Grik
Ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ - Iwepụ. Ọ na-aṅụbiga mmanya ókè n'ụdị dị iche iche dị iche iche nke nkịtị, kama a naghị akwanyere tii;
Ihe oriri na-atọ ụtọ nke Greek souvlaki, obere kebabs na skewers mkpa, na-emekarị anụ ezi;
Ihe karịrị 250 ụbọchị nke anwụ na-acha kwa afọ, e nwere ọtụtụ oghere ndị dị n'elu ụlọ;
Oké osimiri ahụ abụghị naanị 136 kilomita, sitekwa n'ebe ọ bụla mba ahụ;
Site na ọnụ ọgụgụ ịgba alụkwaghịm Gris na-anọchite anya European Union;
Iji bụrụ onye nkuzi ma ọ bụ dọkịta, mana n'ozuzu ọrụ ego niile dị oke mma ma kwụọ ụgwọ;
"Ee" bụ Grik maka "ee" anyị;
N'ụlọ akwụkwọ, mụta asụsụ 2, n'etiti ha Bekee bụ iwu;
Ndị Gris bụ ndị okpukpe - kwa ụbọchị n'ụlọ akwụkwọ tupu klas agụ ekpere, ezumike kachasị amasị - Ista.
Rhodes bụ onye a ma ama maka otu nde butterflies na ìgwè atụrụ a kwa afọ
Greece na map nke Europe
0.1 Ndepụta nke Top 10 Greek Online Casino Sites
2.0.1 Ebe Gris, na obere akụkọ ihe mere eme
2.1 Casinos na ịgba chaa chaa na Gris
2.2 Egwuregwu Online na Gris
2.2.1 Athens ebe nkiri
2.2.2 Ezigbo ihe gbasara Gris na Grik
2.2.3 Greece na map nke Europe